Xawaare: Nidaamka Xayeysiinta ee Isku-dhafan ee Daabacaadda Dijital ah | Martech Zone
Xawaare: Nidaamka Xayeysiinta Isku-dhafan ee Daabacaadda Dijital ah
Sabti, Agoosto 1, 2015 Isniin, Oktoobar 12, 2015 Douglas Karr
Daabacadaha daabacan waxay wali sii wadaan inay u kaxeeyaan waxyaabo si gaar ah loo bartilmaameedsaday kooxo kala duwan. In kasta oo lacag-la-gujinayo, ku-xirnaanta iyo nidaamyada xayeysiinta banner-ka ayaa sii wadaya inay suuqa ka sarreeyaan hannaankooda fudud ee dalbashada iyo qiimaha hooseeya ee hoggaanka, waxay sidoo kale caadi ahaan helayaan guji hooseeya iyo heerka beddelka Sababtoo ah way jaban yihiin, waxay weli goosan karaan abaalmarinno aan caadi ahayn oo ay ku laaban karaan maalgashi adag suuqa.
Ka fikir ka baaraandegiddaada iyo dhaqankaaga cilmi baarista ah. Markii aan eegay desktop-kaygii iyo sanduuqa iimaylka, waxaa igu soo qulqulaya emayl iyo xayeysiisyo ka imanaya xayeysiistayaasha ku habboon. Waxaan arkaa boqollaal, laga yaabee xitaa kumanaan, walxaha suuqgeynta toddobaad kasta. Laakiin sida aan uga fikiro gudbinta boostada iyo ka qayb qaadashada daabacaadda dijitaalka ah, waa uun xoogaa daabacado ah oo aan ka mid noqdo oo aan waqti u huro inta lagu jiro usbuuca. Dabeecadda daalacashada webka khibradda u soo rogidda daabacaadda dhijitaalka ah ee warqadda ama kiniinka aad ayey uga duwan tahay.
Waxaa jira kumanaan daabacado halkaas ka jira, qaar badan oo ka mid ahna waxay ku fadhiyaan miiska mas'uulka go'aan qaadashada (boostada ama kiniin ahaan). Arrintu waa sida aad ugu darin daabacaadaha dhijitaalka ah xayeysiintaada? Sideedse u jaangooysaa, u abuurtaa una u daabacdaa xayeysiinta daabacaadahaas? Taasi waa waxa Xajmiga waxaa loogu talagalay
Specle wuxuu beddelayaa adduunka daabacaadda iyo wax soo saarka xayeysiinta ee internetka, isagoo soo saaraya xalal fudud oo software ah oo loogu talagalay daabacaadda iyo xayeysiinta kiniiniga.
Specle wuxuu maareynayaa, farsameynayaa oo uu bixiyaa kumanaan faylasha xayeysiiska ah bishiiba saldhig macaamiil aad u weyn, oo ay ku jiraan daabacaado waaweyn (Hearst, Condé Nast, News UK, Guardian, DMG media, TimeInc UK); hogaaminaya wakaaladaha hal abuurka (McCann Erickson, VCCP, BBH) iyo noocyada caalamiga ah ee yar iyo weyn. Xiriirinta 'Specle' ma sahlanaan karin, kaliya ka raadso mowduuc, raadso daabacaad, hel faahfaahinta oo dalbo xayeysiiska:
Specle wuxuu dhawaan ku dhawaaqay door wadashaqeyn muhiim ah Xalka Daabacaadda Adobe Digital, awood u siinta soo-saarista iyo soo-jiidashada xayeysiinta dhijitaalka ah ee barnaamijyada iyadoon loo baahnayn lambar. Nidaamka xayeysiinta isku dhafan ee Specle wuxuu u oggolaan doonaa kooxaha hal abuurka iyo nashqadeynta inay xayeysiiyaan barnaamij kasta oo la abuuro iyadoo la adeegsanayo Adobe DPS. Barnaamijka 'Specle' wuxuu u fududeynayaa sidii hore abid wakaaladaha hal-abuurka iyo daabacayaasha si ay u soo gudbiyaan xayeysiisyo dhijitaal ah oo qurux badan.
Ku saabsan Xalka Daabacaadda Adobe Digital
Adobe DPS waa aalad ku saleysan websaydhka oo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay abuuraan daabacaadyo dijitaal ah oo daabacaaddooda ah. Nakhshadeynta iyo kooxaha hal-abuurka ahi waxay si fudud u abuuri karaan barnaamijyo moobiil oo qurxoon iyaga oo aan qorin koodh. Isticmaalka DPS, ururadu waxay ku wadi karaan kaqeybgalka iyagoo adeegsanaya khibradaha barnaamijka moobaylka, waxay u isticmaali karaan awooda daabacaadda dabacsan si isdaba joog ah ula xiriirida isticmaalayaasha, waxayna ku gaarsiiyaan saamayn ganacsi oo la qiyaasi karo barnaamijyada — dhammaantoodna leh madal heer-ganacsi ah oo laga helo Adobe.
Lacag dib loo siiyay laga soo bilaabo sagxadda kor, Adobe DPS waxay u soo bandhigi doontaa dadka isticmaala dabacsanaan badan iyo fursado fiican oo ay kula macaamilaan dhagaystayaashooda. Haddii aad sameyn karto xayeysiis daabacan, hadda waxaad sidoo kale sameyn kartaa xayeysiis dijitaal ah. Specle hadda waxaa lagu dhex daray barnaamijka barnaamijka 'Adobe' ee barnaamijka (API) si loo beddelo fursadaha xayeysiinta dhijitaalka ah - gaar ahaan barnaamijyada - loona abuuro fursado xayeysiin xoog leh.
Tags: Xalka Daabacaadda Adobe Digitaladobe dpsBBHCondé Nastjoornaalka dijitaalka ahdaabacaadda dhijitaalka ahWarbaahinta DMGGuardianHearstxayeysiiska majaladdaxayaysiinta majaladdaMcCann EricksonWararka UKbaaburkaTimeInc UKVCCP
Saamaynta Safarrada Qalabka ee Iskutallaabta iyo Shakhsiyadeed Waqti Dheer